I-Durcal, iwashi lendawo eline-GPS lezingane nabantu abadala | Amagajethi Ezindaba
I-Durcal, iwashi lendawo eline-GPS lezingane nabantu abadala
UMiguel Hernandez | 30/03/2022 10:00 | Gadgets, General, Izibuyekezo, SmartWatch
Ezokuxhumana kanye namathuba esinikezwa wona ukuze sithole abantu abadala kanye nezingane manje sekuthengwa kakhulu futhi kuyafinyeleleka. Inketho yokugcina efikile etafuleni lokuhlaziya ivela enkampanini entsha ebizwa ngokuthi I-Durcal futhi sizoyihlaziya ukuze sibone ukuthi ingabe inikezela ngamakhono amasha kulo mkhakha.
Sihlaziya izici zayo kanye nokusebenza kwayo ukuze sikwazi ukwazi ukuthi izingane zakho zikuphi ngaso sonke isikhathi futhi, vele, nabadala bakho.
2 Izici nokusebenza
3 Umbono woMhleli
Iwashi elilula nelisebenzayo. Inephaneli encane kodwa ibonakala ngokwanele, kuyo sinolwazi oluyisisekelo njengebhethri, izinyathelo ezithathiwe, idethi kanye nokufakwa kweselula. Ukwenza ngokwezifiso okuncane kulesi sici.
Isongo silula kakhulu, sihlanganiswe emzimbeni we-silicone, Izikhonkwane zokushaja ezimbili kanye nenzwa ye-oksijini yegazi kanye nenzwa yokushaya kwenhliziyo kuhlala engxenyeni yayo engezansi. Lezi ezimbili ziyizinzwa kuphela idivayisi enazo ezingeni lamakhono, ngaphezu kwezinye izici zobuchwepheshe esizokhuluma ngazo ngezansi.
Ezingeni lokuklama nelokukhiqiza, iwashi lifuna ubulula, i-minimalism nokumelana, ngaphandle kokuzenzisa. Isikrini asikona ukuthinta, ukuzulazula ngezinketho sizocindezela inkinobho ephakathi, ngenhliziyo ebomvu njengenkomba. Ngayo singabona ukushaya kwenhliziyo, umoya-mpilo wegazi, imiyalezo futhi ekugcineni sivale iwashi.
Iwashi linemakrofoni, isipikha kanye neselula, njengoba sesishilo, inalo Ikhadi lakho le-nanoSIM lifakiwe. Ukukubeka kufanele sisuse izikulufo ezimbili ezincane ezine-screwdriver ezifakiwe. Ngakolunye uhlangothi, iphinde ibe nesixwayiso sokuwa okuhlakaniphile, iwashi lizoyibona ngokuzenzakalelayo futhi lithumele isexwayiso kuhlelo lwe-Durcal.
Manje sekuyisikhathi sokukhuluma ngesicelo. Yinto yokuqala okufanele siyilande ngokuphelele Kumahhala kukho kokubili i-Android ne-iOS futhi kusivumela ukuthi sithole iwashi, siphathe imingcele ethile, siyivumelanise futhi, vele, samukele izexwayiso ezishiwo ngenhla.
Inqubo ye ukuvumelanisa ilula:
Silanda uhlelo bese senza i-akhawunti ngefoni yethu
Sivula iwashi ngemuva kokufaka i-nanoSIM
Siskena ibhakhodi nge-IMEI
Iwashi nohlelo lokusebenza kuzovunyelaniswa ngokuzenzakalela
Iqiniso liwukuthi uhlelo lokuvumelanisa lulula kakhulu futhi luyaziswa. Kodwa-ke, akumele sikhohlwe ukuthi kulokhu sizodinga ukwethula ikhadi elifakiwe, futhi vele unenkontileka yohlelo lwe-Movistar Prosegur Alarmas:
Inkokhelo yanyanga zonke ngokuhlala kwezinyanga eziyishumi nambili okungu-€19/ngenyanga
Inkokhelo yonyaka engu-€190
Kufanele sicabangele ukuthi uma sikhansela isevisi ngaphambi konyaka, kuzodingeka sikhokhe izitolimende ezisele zenyanga kuze kufike ezinyangeni eziyishumi nambili. Yebo kunjalo, zonke lezi zinhlelo zihlanganisa iwashi ngokuphelele mahhala.
Ngamafuphi, lolu hlelo lokukhokha lokubhaliselwe luzosivumela ukuthi "zilawulwe" izingane zethu, abantu abadala kanye nabantu esibanakekelayo. Ngokucindezela imizuzwana emi-3 enkinobho eyodwa kuphela enayo, Sikwazile ukuqinisekisa ukuthi emizuzwaneni embalwa ochwepheshe be-Movistar Prosegur Alarmas bathintana kanjani ukuze baqinisekise isimo somsebenzisi futhi bangenelele uma kunesidingo, ngaphezu kwalokho:
Thola izexwayiso kuhlelo lokusebenza lwe-Durcal mayelana nanoma yiluphi uhlobo lokuwa
Hlaziya izimpawu ezibalulekile zomsebenzisi wewashi
Linganisa izinyathelo futhi ulawule imizila eyenziwe i-GPS
Izaziso zokufika nokusuka ezindaweni ezijwayelekile
Indawo esheshayo nge-GPS
Ukuzimela cishe izinsuku eziyi-15
Akungabazeki ukuthi kungenye indlela yokukwazi ukuzuza ukuthula kwengqondo, ngezindleko, kunjalo, kodwa inikeza lokho ethembisa kona mayelana nokusebenza namandla, ngaphandle kokuzenzisa okungaphezu kwalokho okunikezwa kukhathalogi. Ungayithenga ngokuqondile ngewebhusayithi yayo noma ngokushayela ku-900 900 916 futhi wenze isivumelwano sohlelo olukugculisa kakhulu, uzoluthola kungakapheli amahora angama-48 wenkontileka.
Kuthunyelwe ku: I-30 March ka-2022
Ukulungiswa kokugcina: I-27 March ka-2022
Akukho ukwenza ngokwezifiso
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Durcal, iwashi lendawo eline-GPS lezingane nabantu abadala
Manje usungakwazi ukubhuka i-Doogee S98 entsha ngentengo engcono kakhulu
I-SPC Smart Ultimate, inketho yangempela yokonga kakhulu